Tag: sender authentication package | Martech Zone
Ithegi: iphakheji yokuqinisekisa yomthumeli
Uninzi lweenkampani ezithumela i-imeyile ziyithathela ingqalelo into yokuba ukuhanjiswa kunokuba nefuthe kangakanani kwimibutho yabo. I-imeyile entle, eyakhiwe kakuhle, kunye nokusebenza ngokukuko inokufikelela kwifolda ye-junk yomntu obhalisileyo kwaye onqwenela ukuguqula nenkampani yakho. Yimeko embi ukuba ungene kuyo. Okubi nangakumbi kukuba, unokungazi nokuba ii-imeyile zakho zigqithiselwa kwinkunkuma ngaphandle kokuba usebenzisa isixhobo sokujonga ibhokisi engenayo. Ingcebiso yam malunga noku ngamaqabane ethu